Semalt: Indlela Yokuvimbela I-WordPress I-Bop Spam? - Isiqondiso Esikhulu
I-spam bots ingaba nenkani kakhulu uma kuziwa ekukhiqizeni izibalo eziwusizo zewebhusayithi yakho. Bamba imininingwane yakho ye-analytics, balethe idatha yamanga kanye nokulahla izixhumanisi eziningi zogaxekile kusigaba sakho sokuphawula. Ngenhlanhla, uFrank Abagnale, onguchwepheshe ohamba phambili Semalt , uyakwazi ukuqeda i-WordPress spam kusuka kuwebhusayithi yakho ye-WordPress.
Ama-spambots ayizinhlelo ezinonya ezenziwa ukukhwabanisa okuningi kwe-intanethi - india online tv buy. Lezi zinhlelo zifuna ukudala uhlu lwe-imeyili lokusabalalisa amathuluzi abo ngokusebenzisa ama-imeyili ogaxekile kwabanye abasebenzisi. Uma bekhohlisa isisulu ngokuchofoza kubo, ikhompyutha yomsebenzisi isebenza ngaphansi kwemilayezo yomhlaseli. I-spam bots zama ukubhalisa ama-akhawunti omsebenzisi we-fake, ukuphazamisa idatha yakho ye-analytics kanye nokweba imininingwane yamakhasimende. Ukuqeda lezi bots kubalulekile.
Kungani kufanele ususe i-WordPress spam bots
Abantu abathuthukisa amawebhusayithi badinga ukumaketha kwedijithali kanyekanye. Nge-spam bots ekubulaweni, imizamo yokumaketha ye-digital ayikwazi ukukhishwa. Abantu bavame ukubhekana nezinkinga eziningi mayelana nemiphumela ye-spam bots. Isibonelo, i-spam bots yenza idatha yakho yewebhusayithi eholela emininingwaneni yamanga njenge:
Izinga eliphezulu lokunciphisa
Ukudluliselwa kwezimoto kusuka kumasayithi amaningi
Isikhathi sesigamu samasekhondi angu-0
Idatha yabantu abathintekayo
Ukuvakashelwa kwekhasi le-Phony
Ngenxa yalokho, izinhlelo zokukhangisa ezizayo azikwazi ukukwenziwa. Ngaphezu kwalokho, ezinye izinhlelo ze-digital njenge-SEO zithinteka kakhulu..Ngokwesibonelo, ukuvakashelwa kwewebhu okukhohlisayo kuholela ekuhlulekeni kwesigaba. Ukubaluleka kokuqukethwe kwakho kwehla njengoba ezinye izici zokubala ziqhubeka nokuhluleka.
Ama-spambots angase alethe nezixhumanisi eziningi zogaxekile kusigaba sokuphawula sewebhu lakho. Abasebenzisi bakho bangase bahlaselwe ukuhlaselwa kwabo ngobugebengu bokuphanga. Bavame ukusabela ngokushesha ezindabeni ezingenza umsebenzisi acabange ukuthi laba bangabasebenzisi abasemthethweni. Ngenxa yalokho, bangase batshayele imoto ezindaweni zabo ngakho kuphazamise isimo sakho.
Ungamisa kanjani ama-spampoti e-WordPress
Kulula ukuvimbela lezi bots ngokufinyelela iwebhusayithi yakho. Ngokusebenzisa ezinye izilungiselelo, ungakwazi ukusebenzisa izinyathelo zokuphepha ezanele ukuqinisekisa ukuthi izivakashi zabantu kuphela ziza kusayithi lakho. Amanye ama-plugin angaphinde alethe ukuvikelwa okweziwe ngomphumela wama-spambots. Ezinye zezindlela zokugwema ama-spam bots zihlanganisa:
1. Ukufaka ama-plugin ezithakazelisayo
Kwabanye abasebenzisi, kubalulekile ukufaka amanye ama-plugin angakwazi ukuvikela amawebhusayithi awo kugaxekile. Isibonelo, i-plugin efana ne-blocker yokudlulisela ukuxhunyelwa kogaxekile ingavimbela abasebenzisi ukuthi bangathumeli ugaxekile ku-imeyili yakho. I-plugin efana ne-bot block ingavimbela ama-bots avela kwezinye izizinda eziphambili zokudluliselwa kogaxekile
Ukucabangela umthombo wama-plugin wakho kubalulekile. Amanye ama-plugin angenza imiphumela emibi kuwebhusayithi yakho ebangela imiphumela eningi yogaxekile. I-plugin eyodwa ephephile ingaba spam yokuhlaziya i-WordPress block. Le plugin ibimbela ithrafikhi evela kusizinda se-spam sokudluliselwa kwe-Google analytics.
2. Ukulawula isigaba sokuphawula
Kwezinye izimo zokuphepha, kungase kudingeke uvimbele i-WordPress bots spam ewela esigabeni sokuphawula. Ungasebenzisa ama-plugin ukuphatha ibhulogi yamazwana ekuboniseni phezulu kumazwana wakho we-WordPress. Ukuze ulawule amazwana ngesandla, iya kuzilungiselelo zengxoxo. Lapha, ungakwazi ukuhlela noma usethe abantu okufanele babeke amazwana kuwebhusayithi yakho.